Mpamatsy sakafom-biby sy ozinina - mpamokatra famahanana biby any Sina
Product Detail 65Mn-elastika lohataona-nify dia miantoka fa ity hayrake ity dia afaka miova amin'ny endrika tany samihafa. Ny rotry arm dia afaka mihodina 90 degre, amin'izay hanamorana ny traktera hiasa any an-tsaha. Mandritra izany fotoana izany, ny zoro iraisana dia azo ahitsy mba hahafeno ny fepetra takiana. Famaritana ara-teknika Model Unit 9LZ-2.5 9LZ-3.0 Niasa sakan'ny mm 2500 3000 Herinaratra mifandraika hp ≥15 30-40 Qty kapila pcs 4 5 Swath sakany mm 500-1500 ...
Antsipirian'ny vokatra Ny masinina vita amin'ny hay hay dia mety amin'ny ahantona amin'ny fitaovana fampiatoana teboka telo an'ny traktera misy kodiarana. Ny ampahany miasa dia ilay kapila misy nify. Ny milina fanarom-boalavo dia ampitaina amin'ny takelaka rantsan-tànana farany manaraka ny lohan'ny rantsan-tànana mandra-pahatongan'ny felam-bozaka malalaka sy rivotra. Manova ny zoro amin'ny takelaka rantsan-tànana dia afaka manitsy ny sakan'ny bara ahitra. Mifoka nify ho an'ny nify vy lava amin'ny lohataona, mametaka ny vokatra tsara, fampisehoana mandika mahery. Ny rak ...
Masinina Fellet Mill Ny milina pellet feed dia milina fanodinana feed izay manindry mivantana ireo akoran'ny katsaka, ny sakafo soja, ny mololo, ny ahitra, ny sekam-bary, sns. Ny masinina dia misy milina herinaratra, boaty fanamoriana, vatan'ny fiara, takelaka maty, fanodinam-gazety, hopper feed, cutter ary hopper marary. Ampiasaina be amin'ny zaridaina lehibe, salantsalany sy kely, zavamaniry fanodinana sakafo, fiompiana, fiompiana akoho, tantsaha tsirairay ary fambolena kely sy salantsalany, farme ...
Antsipirian'ny vokatra Ny masinina taham-mololo dia ampiasaina hanapahana vodin-katsaka maintso (maina), mololo varimbazaha, mololo vary ary tahon-javamaniry hafa sy kijana. Ireo fitaovana voahodina dia mety amin'ny fiompiana omby, ondry, serfa, soavaly sns, ary afaka manodina vodin-kazo, sampana, hodi-kazo, sns., Ampiasaina amin'ny indostria toy ny famokarana herinaratra, fitrandrahana etanol, fanaovana taratasy ary hazo. tontonana mifototra. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny motera diesel na maotera elektrika ho herinaratra. Fitsipika miasa ...
Product Detail RYAGRI series thresher katsaka dia be mpampiasa amin'ny fiompiana, ny fambolena ary ny fampiasana fianakaviana. Ampiasaina indrindra amin'ny famelezana katsaka izy io nefa tsy manimba ny voan-katsaka ary manana ny mampiavaka azy ny firafitra mirindra, ny fahombiazany ary ny asany mora. Araka ny filan'ny mpanjifa, afaka manome mpitsabo amin'ny fahombiazan'ny asa samy hafa izahay. Ireo mpikapoka ireo dia azon'ny traktera alefa amin'ny traktera, ary afaka mifanaraka amin'ny motera diesel na motera. Tombony 1. Azo esorina ny masinina ary ...